Ukukhulisa iinguqu ngokuSebenza ngeNtengiso yezeNtlalontle | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Julayi 25, 2014 NgoLwesithathu, Agasti 30, 2017 Douglas Karr
Le infographic emangalisayo ixhaswe yiTollFreeForwarding ehamba ngeshishini eliphakathi okanye kwintengiso ngokusebenzisa amaqhosha ama-6 okuphumeza ukuqhuba ukuthengisa ngokusebenzisa imithombo yeendaba zentlalo:
Iifanele zokuthengisa zisetyenzisiwe kwihlabathi lokuthengisa kuba zibonelela ngendlela yokwenza lula kwaye zibonise indlela yomthengi ukusuka ekuqaleni ukuya kwisenzo sokugqibela. Ngokwesiko oku kwakuthetha ukusuka kwinqanaba lokuqala lokwazisa kwintengiso, kodwa kwihlabathi lanamhlanje lentlalontle, liqhubeka ngakumbi kunoko. UJodi Parker
I-77% yabathengi abakwi-Intanethi badibana nokulinganisa kunye nokuphononongwa ngaphambi kokuthenga kunye ne-80% yabathengi balindele ukuba amashishini asebenze kwimidiya yoluntu
Imidiya yokuncokola yindawo ephakathi engenanto apho unganalo ithuba lokuthengisa, unethuba lokuba abathengi bakho bathengise egameni lakho! Ndiqinisekile ukuba ungena kuyo nayiphi na iqonga loluntu namhlanje, uya kufumana abantu abafuna iimveliso okanye iinkonzo zakho. Ngaba ukhona xa bebuza? Ngaba abathengi bakho balapho kwaye bonwabile nawe kangangokuba bayaphendula?
Nantsi i-infographic ebeka isishwankathelo esihle se Imithombo yeNtanethi yokuGuqulwa kweendaba:
tags: intambo yokuguqula imidiya yoluntuukuguqulwa kweendaba ezentlaloukondla imithombo yeendaba zentlalointengiso yemidiya yoluntu
Nantsi indlela yokuPhucula iBhlog yakho yokuThengisa uMxholo